लगातार घटिरहेको सुनको भाउ आज पनि घट्यो !::Leading Nepal News
लगातार घटिरहेको सुनको भाउ आज पनि घट्यो !
जेठ ०९, काठमाडौं । हिजो तोलामा १०० रुपैँयाले घटेको सुनको भाउ आज पनि घटेको छ । आज सुन तोलामा नै २०० रुपैँयाले घटेका हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ५९ हजार २०० रुपैँयामा कारोवार भइरहेको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुन प्रतितोला ५८ हजार ९०० रुपैँयामा कारोवार भइरहेको छ । आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा ५ रुपैँयाले घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ७०० रुपैँयामा कारोबार भइरहेको छ ।यो पनि पढ्नुहोस्….
भारतीय लोकसभा चुनाव : केरलको वायनाडमा राहुल गान्धी ५८ हजार मतले अगाडि
सुरुवाति मतगणनामा बीजेपी नेतृत्वको राष्ट्रिय गणतान्त्रिक गठबन्धन(एनडीए) ३०० भन्दा बढी सिटमा अगाडि रहेको छ । बीजेपी एक्लै २८०भन्दा बढी सिटमा अगाडि रहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन(यूपीए) १०० आसपास सिटमा अगाडि रहेको छ भने अन्य दल १०० भन्दा बढी सिटमा अगाडि रहेका छन् । ५४३ सिट रहेको भारतीय लोकसभामा सरकार बनाउन २७२ सिट आवश्यक पर्छ । सुरुवाति रुझानमा भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी उत्तर प्रदेशको अमेठीमा बीजेपी उम्मेदवार तथा केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानीको अघि पछि रहेका छन् । राहुल गान्धी केरलको वायनाडबाट पनि उठेका छन् । वायनाडबाट भने राहुल गान्धी ५८ हजारभन्दा बढी मतले अग्रता बनाएका छन् ।
वाराणसी क्षेत्रबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ४१ हजार भोटले अगाडि रहेका छन् । वाराणसीमा समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी गठबन्धनकी उम्मेदवार शालिनी यादव दाेस्राे स्थानमा छिन् भने तेस्राे स्थानमा कांग्रेसका अजय राय रहेका छन् । त्यस्तै भारतमा मात्रै होइन नेपालमा पनि चर्चित रहेको बिहारको बेगुसरायमा बीजेपी उम्मेदवार तथा केन्द्रीय मन्त्री गिरिराज सिंह ५० हजारभन्दा बढी मतले अगाडि रहेका छन् । बेगुसरायमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार कन्हैया कुमार गिरिराज सिंहसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । साथै राष्ट्रिय जनता दलबाट तनवीर हसन पनि यसै सिटबाट प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
‘फ्लुले ३६ घण्टामै ८ करोडको ज्यान लिन सक्छ’ !